Umamaki Omdala uqhathaniswa noMarketer Omusha. Ungubani? | Martech Zone
Umamaki Omdala uqhathaniswa noMarketer Omusha. Ungubani?
NgoLwesithathu, Septemba 23, 2009 Douglas Karr
Ngenkathi ngifunda ngocwaningo oluthile kusayithi le-Alterian, ngadlula kulo mdwebo omuhle kubo ukuzibandakanya kwamakhasimende ikhasi. Umdwebo uveza kahle ukuthi ukumaketha kushintshe kanjani. Ukubuyekeza lo mdwebo, kufanele kukwenze kucace ukuthi ukumaketha kwakho kuguquke noma cha.
Ngabe uvele njengoMarketer? Ingabe inkampani yakho?
Namuhla ngichithe isikhathi ngamathemba ahlukene amathathu nezizathu ezijwayelekile zokuthi kungani zingazange ziguquke zazikhona ukwesaba, izinsiza, Futhi ubuchwepheshe. Ngicabanga ukuthi lokhu kukhomba ukuthi kungani kubaluleke kangaka ukugcina usizo lwe- umxhumanisi wokuthengisa online. Bangakunikeza inkampani yakho imiphumela elinganisekayo nezindlela ezisebenzayo zokunciphisa izinsizakusebenza ezidingekayo… konke ngenkathi kuqedwa ukwesaba.
Tags: adincazelo yomkhiqizoi-curalateukusebenzisana nge-imeyilimulti-touchukwenza ngezifiso onlineUkukhiqizaubuchwepheshe bokuthengisaukuzibandakanya kwesizaWordPress
3 Izizathu Zokuqasha I-PR Firm
Qaphela i-Internet Famous
Sep 24, 2009 ku-11: 40 AM
Ukumaketha kwanamuhla kufaka phakathi umthamo osindayo wezobuchwepheshe ngenxa yendlela ukuxhumana okube yingxenye ebalulekile yendawo yethu. Bonke "abagqoka amawashi esihlakaleni". isixuku esingaphezulu kwama-50 asikhululekile ngobuchwepheshe futhi asikaqondi ukubhuloga okungatheni kakhulu nazo zonke ezinye izinto 'ezilokhu ziza kithi masinyane. Njengoba usho, uDoug, umxhumanisi okwi-inthanethi ubaluleke kakhulu futhi unezindima ezimbili ezinkulu namuhla: ukuqeqeshwa nokuqinisekiswa .. Kungaleso sikhathi kuphela lapho uvalo luzoqala ukuqedwa.
Sep 24, 2009 ngo-2: 44 PM
Angiqiniseki ukuthi okushiwo okungaphezu kuka-50 kuyiqiniso futhi, noma kunjalo. Ukukhula kumanethiwekhi afana ne-facebook kubona ukukhula okusheshayo kubantu abadala kunabancane. Intsha iyashesha ukwamukela, kepha abantu abadala bayayamukela lapho bebona ukubaluleka kwayo. Nginenethiwekhi yokuxhumana yamaNavy Vets lapho iminyaka emaphakathi ingaphezu kuka-50 - futhi labo bantu balayisha izithombe, basebenzisa amabhulogi abo, babamba iqhaza ezinkundleni… baxhumane ngempela!
Okthoba 4, 2009 ngo-9: 56 AM
Ngineminyaka engaphezu kwengu-50 futhi ngiyalithanda iwashi lami lesandla. Nginebhizinisi lokusingathwa kwamahhala le-ePortfolio kepha ngivumelana noJim ukuthi ama-50s angaphezulu akakhululekile ngobuchwepheshe. Njengomfundisi kwi-eBusiness futhi noma ngike ngalwa iminyaka neziqu ze-undergraduates ezazingakhululekile ngayo. Siyabonga unkulunkulu nge-Facebook njengoba isishintshe isimo sendawo. Manje ngithi - uyayisebenzisa i-Facebook futhi uma impendulo inguyebo (okuvamise ukuba yiyo) ngithi-ke ungasebenzisa ibhulogi, i-wiki, i-twitter noma enye imidiya ngaleso sikhathi. Lokhu kuqala ngama-50s angaphezulu kepha kuhamba kancane. Inkinga enkulu engikhuthaza ngayo ukusetshenziswa kwe-ePortfolio ngothisha, hhayi abafundi. Ngisungule ukwelulekwa kwabafundi kothisha futhi kusebenza kahle impela. Ukuqeqeshwa nokuqinisekiswa kuyisihluthulelo. Siyabonga ngokuthunyelwe. Ozithobayo, u-Ian Knox
Sep 24, 2009 ngo-1: 05 PM
Ngivumelana nawo wonke amaphuzu akho, ngaphandle kokuthi, SIYAZI - Njengabamakethi, sazi okuningi ngezimakethe zethu namakhasimende esasikwenza ngaphansi kwendlela yakudala, kepha kusenesidingo sokuhumusha kanye nokweqa kokholo ekukhangiseni kwanamuhla.
Sep 24, 2009 ngo-2: 45 PM
Yebo, mhlawumbe bebengasho kangcono ukuthi 'Singathola'. 🙂 Ngicabanga ukuthi impande ukuthi akusadingeki ukuthi senze ngokuvumelana nomqondo kuphela. Namuhla thina NGCONO senza ucwaningo oluthile ukuze sisize izinqumo zethu zokumaketha!
I-Oct 5, i-2009 ku-3: i-13 PM
Vumelana nawe Lorraine. Singasondela "ekwazini" ngokuba nemininingwane engcono kakhulu evela kuma-analytics. Kunokuqagela okuncane okuhilelekile. Kokunye, ukumaketha ezinsukwini zangaphambi kwe-inthanethi kwakulula ngokuba nezinketho ezimbalwa ongazibheka: i-TV, imidiya yokuphrinta, ukumaketha okuqondile ngeposi nangokucela ifoni. Manje njengoba kunezinqumo eziningi zokumaketha online, ikakhulukazi ezinemithombo yezokuxhumana kumxube, izinketho zokumaketha zihluke kakhulu. Futhi ukuqagela okunye kuyabandakanyeka ezinkethweni eziyimfihlakalo ezingafinyeleleki ezimema ithuba nengozi.
Okthoba 6, 2009 ngo-6: 09 AM
Akufanele kube 'okusha', kepha kanjani nge-We Think> We Test.